5BY-5A Muchina Wekuputira Mbeu /Mbeu yekuchenesa gorosi paddy
Muchina we5BY-5A wekuputira mbeu unonyanya kushandiswa kugadzira mbeu. Inoshandiswa zvakakura mukuputira mbeu yezvirimwa zvakasiyana, sembeu yegorosi, bhari, chibage, mhunga, soya beans, donje, muriwo, michero zvichingodaro. Mbeu dzinozoputirwa nemushonga wemvura usati wadyarwa, wekubata nezvirwere zvakasiyana uye kuitira kumera zvakanaka.
5BY-5B Muchina Wekuputira Mbeu /Mbeu yekuchenesa bhari repaddy
Iyo 5BY-5B Seed Coating Machine inonyanya kushandiswa kugadzira mbeu. Inoshandiswa zvakanyanya mumbeu dzezvirimwa zvakasiyana, segorosi, bhari, chibage, mhunga, soya bhinzi, donje, muriwo, michero zvichingodaro.
5BY-10B Muchina Wekuputira Mbeu /Mbeu yekuchenesa bhinzi yechibage chebhari
Iyo 5BY-10B Seed Coating Machine inonyanya kushandiswa kugadzira mbeu. Inoshandisa zvakakura mukuputira mhodzi yezvirimwa zvakasiyana, semhodzi yegorosi, bhari, chibage, mhunga, soya beans, donje, mhodzi yemuriwo, mbeu yemichero zvichingodaro.
Mbeu uye seed coating agent inosanganiswa zvakafanana zvichienderana nereshiyo yakatemwa uye kugadzira firimu rekunamira pamusoro pembeu. Inovandudza kudzivirirwa kwezvirwere zvembeu uye insecticidal effect mushure mekudyara. Batch type seed coating machine muenzaniso wakakosha mukugadzirisa nekugadzira mbeu.